Mpanamboatra pipa thermoplastika nohamafisina tsara indrindra. Wanhoo
Ny fantsom-panafody thermoplastic nohamafisina (RTP) dia teny iraisana ilazana ny fibre synthetic tanjaka avo lenta (toy ny vera, aramid na karbonina)
ny tena mampiavaka azy dia ny fanoherana ny harafesina / fiaretana faneriterena avo lenta ary mitazona ny fahaleovan-tena miaraka amin'izay, azo atao endrika endrika (fantsona mitohy), miaraka amin'ny lavany iray metatra am-polony ka hatramin'ny kilometatra amin'ny rool iray.
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ity karazana fantsona ity dia nekena ho vahaolana hafa mahazatra amin'ny vy ho an'ny fampiharana ny làlan-tsolika ataon'ireo orinasan-tsolika sy mpandraharaha sasany. Ny tombony an'ity fantsona ity dia ny fotoana fametrahana azy tena haingana raha oharina amin'ny fantsom-by rehefa dinihina ny ora fanamafisam-peo satria ny salan'isan'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 1.000 m (3,281 ft) / andro dia tratra nametraka RTP tamin'ny tany
Teknika famokarana RTP
Ny fantsona thermoplastic nohamafisina dia misy sosona fototra 3: liner thermoplastic ao anatiny, fanamafisana ny fibre mitohy manodidina ny fantsona, ary palitao thermoplastic ivelany. Ny valin-drihana dia miasa ho toy ny tatavia, manome tanjaka ny fanamafisana ny fibre, ary miaro ireo fibre mitondra entana ny palitao.
Fanoherana avo lenta: Ny fanoherana fatratra ny rafitra dia 50 MPa, 40 hetra fantsona plastika.
Fanoherana ny hafanana avo: 130 ℃, 60 ℃ ambony noho ny fantsom-plastika ny mari-pana faran'izay betsaka amin'ny rafitra.
Ela velona: fantsona vy 6 heny, fantsona plastika in-2.
Fanoherana ny harafesina: tsy manimba sy tontolo iainana.
Ny hatevin'ny rindrina: ny hatevin'ny rindrina dia 1/4 amin'ny fantsona plastika, manatsara ny tahan'ny fivezivezena 30%.
Maivana: 40% ny halavan'ny fantsom-plastika.
Tsy refy: Ny rindrina anatiny dia malama ary tsy refy, ary ny tahan'ny hafainganam-pandeha dia 2 hetra amin'ny fantsom-by.
Tsy mitabataba: Low friction, ambany material density, tsy misy tabataba amin'ny rano mikoriana.
Miraikitra matanjaka: superposition fibre-vera misy sosona roa ao amin'ny tonon-taolana, faladia miempo mafana, tsy mitete mihitsy.
Vidiny ambany: Manakaiky ny vidin'ny fantsom-by sy 40% ambany noho ny fantsom-plastika.
Teo aloha: Thermoplastic UD-Tapes
Manaraka: Tontonana maina karatra boaty-Thermoplastic